Madaxweyne Siilaanyo oo safar gaar ah ku tegay Imaaraadka
Madaxweynuhu Saxaafadda lamuu hadlin markii uu dhoofayey
Madaxweyne Siilaanyo oo lagu sagootinayo Madaarka
Hargeysa(GNA)-Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta safar ugu anbabaxay dalka Imaaraadka Carabta, halkaasoo uu muddo toban maalmooda safar gaar ah ku joogi doono, sida uu sheegay sarkaal u hadlay Dawladdu.
Madaxweyne Siilaanyo markii uu ka dhoofayey Madaarka Hargeysa lama uu hadlin Warbaahinta, hasse-ahaatee afhayeenka Madaxtooyada Xuseen Aadan Cigge (Deyr) ayaa sheegay in safarkan madaxweynuhu yahay mid gaar ah ee aanu howl-shaqo u bixin.
“Madaxweynaha Somaliland waxaa uu maanta u baxay dalka Imaaraad Carabta wuxuuna ahaa safar khaas ah oo aan ahayn mid shaqo, muddana wuu ku maqnaanayaa, mudadda uu halkaasi joogo wixii shaqo ah ee Qaranku leeyahay ee la soo gudboonaada awalba siddii uu u qaban jiray buu u qabanayaa”ayuu yidhi Xuseen Dayr.
Safarka Madaxweynaha ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli dood badani ka dhalatay gudaha Somaliland, Taageerada xukuumaddiisu u fidisay xulafada Sucuudiga Khilaafka diblomaasiyaddeed ee Khaliijka Carabta.
Laakiinse socdaalka Madaxweynuhu uma muuqdo mid saamaynaya arrimaha Siyaasada ee Gobolka ka jira.
Imaaraadka Carabta iyo Somaliland
Waddanka Imaaraadka Carabta, ayaa sanadijii u dambeeyey xidhiidh fiican la yeeshay Somaliland, waxaana xidhiidhkaasi ku qotomaa Mashaariic Maal-gashi iyo Iskaashi Milateri oo bilow ah.
Shirkadda DP WORLD oo ah shirkad Maamusha Dekeddo badan Adduunka ah, ayaa la wareegtay Maamulka Dekedda Berberea, maal-gashi socon doona in ka badan Soddon sannnadood.
Dhinaca kale, dawladdaha Imaaraadka waxay Saldhig Milateri ka kiraysteen Magaalada Berbera, waxaanay arrimahaas kaga bedesheen Dawladda Somaliland Malaayiin Dollar oo Maal-gelin ah iyo Mashaariic horumarineed, sida ay sheegeen Madaxda Somaliland.
Waxa kale oo la filayaa in Qoyska Madaxweyne Siilaanyo marka uu xilka ka dego uu degi doono Magaalada Dubai, halkaasoo ay Dawladda Imaaraadku ka siisay qasri uu ku noolaado.
dubai iMAARAADKA madaarka siilaanyo Somaliland	2017-06-16
Previous: Magaalo Masaajid ku yaallo oo laga helay Itoobiya
Next: Dawladda Soomaliya oo caydhisay madaxii Hay’adda FAO